Sheekh Caan Ah Oo Muslimiinta Bariga Dhexe Ugu Baaqay Inay Soo Dhaweeyaan Masiixiyiinta – somalilandtoday.com
Sheekh Caan Ah Oo Muslimiinta Bariga Dhexe Ugu Baaqay Inay Soo Dhaweeyaan Masiixiyiinta
(SLT-Qaahira)-Madaxa goobta ugu sarreysa ee lagu barto diinta Islaamka ayaa waxa uu ugu baaqay Muslimiinta Bariga Dhexe inay soo “dhaweeyaan” Masiixiyiinta la nool.
Sheekh Axmed al-Tayeb, oo ah Imaamka weyn ee al-Azhar ee dalka Masar, ayaa waxa uu sheegay dadkii isugu yimid kulanka diimaha ee ka dhacayay magaalada Abu Dhabi ee uu ka qeybgalay Baadari weynaha Pope Francis, in Masiixiyiintu ay “walaalaheen yihiin”.
Sidoo kale waxa uu Muslimiinta ku nool Galbeedka ugu baaqay inay dhexgalaan bulshooyinkooda iyagoo dhaqankooda ilaashanaya.
Khudbaddiisa ayuu Baadari weyne Pope Francis waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaallada ka soconaya Bariga Dhexe.
Madaxa Kaniisadda Roman Catholic-ga, kaas oo booqashadiisii ugu horraysay ku jooga jasiiradda Carabta, ayaa waxa uu sheegay in “cawaaqib xumo aad u daran” oo ay sababeen qulqulatooyinka laga dheehan karo dalalka Yemen, Suuriya, Ciraaq iyo Liibiya.
Imaaraatka Carabta ayaa waxa uu qeyb ka yahay isbahaysiga uu Sucuudigu horkacayo kaas oo faragelinta uu ku hayo colaadda Yemen ay gacan ka gaysatay in dalkaasi ay ka dhacdo dhibaatada bini’aadamnimo ee ugu xun ee haatan ka taagan dunida.
Sheekh Axmed iyo Baadari Francis ayaa waxa ay khudbado u jeediyeen dad matalayay diimo kala duwan oo habeenkii Isniintii isugu tagay magaalada Abu Dhabi kaddib markii ay saxiixeen “Dikumintiga ku saabsan in wadadhalashada bini’aadamka loo isticmaali karo in la wada noolaado nabadna caalamka uu noqdo”.
Dikumentiga ayaa waxa uu hogaamiyayaasha dunida ugu baaqayaa inay wadashaqeeyaan si “loo faafiyo dhaqanka ku dhisan dulqaadka” iyo “in xilliga ugu horreeyo faragelin la sameeyo si loo joojiyo daadinta dhiigga dad aanan waxba galabsan iyo in la soo gebagabeeyo dagaallada, colaadaha, cimillada sii xumaanaysa iyo hoos u dhaca dhaqan iyo niyadeed ee uu caalamku haatan wajahayo”.
Dikumintiga ayaa sidoo kale waxaa ku jira cambaarayn xooggan oo loo jeediyay dadka magaca Allaah ku bannaysanaya inay qulqulatooyin abuuraan. “Allaah, Subxaanahu, uma baahna inuu qof difaaco mana doonayo in magaciisa loo isticmaalo in lagu argagixiyo dadka,” ayuu qorayaa bayaanka.
Masiixiyiinta – iyo xubnaha dadka haysta diimaha dadkooda laga tirada badan yahay – ayaa sanadahan waxaa si joogta ah dalalka Bariga Dhexe ugu weerrara Islaamiyiinta xagjirka ah. Sidoo kale waxa ay xayiraado ku soo rogeen qaabka ay diintooda ugu dhaqmaan, iyo weliba faquuq dhinaca sharciga iyo bulshada ah.
Khudbaddiisa, ayuu marka hore Sheekh Axmed waxa uu kula hadlay Muslimiinta gobolka.
“Farriinta aan idiin hayo ayaa ah: ‘Soo dhaweeya walaalihiinna Masiixiyiinta ah. Waa walaalihiin dalka idinla leh. Aad ayey inoogu dhaw yihiin. Kuwaasi ayaa ah waxa gaarka ah ee isku kaaya xidhaya,” ayuu yidhi.
Markaa kaddib ayaa waxa uu u weecday Masiixiyiinta Bariga Dhexe waxaannu yidhi: “Waxaan jeclaan lahaa inaydaan adeegsan kalmadda ‘laga tirada badan yahay’.
“Ma tihiin dad laga tiro badan yahay. Waxaad tihiin muwaadiniin. Kalmaddaas aannu iska ilowno. Waxaad tihiin muwaadiniin xuquud buuxdo leh. Waxa isku kaaya xiraya ayaa ah sida dhagax adag oo burburinaya kuwa doonaya inay ina qaybiyaan.”
Imaamka ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay Muslimiinta ku nool Galbeedka inay dhexgalaan bulshooyinkooda iyagoo dhaqankooda ilaashanaya shuruucda maxalliga ahna qadarinaya.
“Haddii dalalka aad ku nooshahay ay kugu soo wajahdo dhibaato diintaada ku saabsan waa inaad la hadashaa hogaamiyayaasha diintaada, sidaasna aad dhibaatada ku xallisaa.”
Subaxa Talaadada, Baadari Francis waxa uu la dabaaldegi doonaa 135,000 oo qof oo isugu iman doona tuulada ciyaaraha ee Zayed ee magaalada Abu Dhabi.